‘अटोमोबाइल क्षेत्रमा सिप्रदीले अटो इलेक्ट्रिसियन तालिम सञ्चालन गर्दैछ’ | Ratopati
personप्रयास श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeपुस २५, २०७६ chat_bubble_outline1
आजको दिनमा विश्व बजारमा उत्पादित एकसे एक अटो उत्पादनले नेपाल प्रवेश पाइरहेको छ । अटो व्यवसायीहरुले दोस्रो, तेस्रो मुलुकहरुबाट उच्च टेक्नोलोजीमा आधारित सवारी साधनहरु नेपाल भित्र्याइरहेका छन् । तर नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रको बिडम्बना आधुनिक टेक्नोलोजीसँगै सोही अनुरूपको वर्कसप सेवा तथा सर्भिसिङ सेवालाई बढवा दिन सकिरहेका छैनन् । बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । गाडीको टेक्नोलोजी अनुरूपका वर्कसप मेनपावर (कामदार) तयार गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अहिले सवारी साधनको माग र प्रयोगभन्दा पनि सवारी साधनको व्यवस्थापनको विषय थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले समेत अटोमोबाइल क्षेत्रको सुधारमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा समस्याको समाधानका लागि निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक पहल भएको छ ।
नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रको अग्रणी संस्था टाटा मोटर्सका लागि एक मात्र अधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले अटोमोबाइल क्षेत्रको प्राविधिक पक्षलाई सम्बोधन गर्ने बजारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नेपालमै अटो इलेक्ट्रिसियन तालिम सञ्चालन गर्दैछ । के हो त अटो इलेक्ट्रिसियन तालिम ? यसमा ककसले भाग लिन पाउँछन् ? आउनुहोस् हेरौँ सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका एचआर हेड सारदा रानासँगको यो वार्ता :
#एचआर हेड शारदा राना
Jan. 10, 2020, 3:56 p.m. gautam kc
म 25 बर्ष भै सके अनि मैले ctvt बाट level 1 पास पनि गरेको छु मलाई यश क्षेत्रमा अत्यन्तै रुचि भएको ले म यश कक्षा मा सहभागी भै आफनो भविस्य सुनिश्चित गर्न चाहान्छु । मलाइ पढन सीप सिक्ने अवसर दिनुहोला यसको लागि मैले के गर्नु पर्ला